WAXAAN HARGEYSA KU ARKAY: Muxaafid mucaarid ah iyo Mucaarid muxaafid ah – Yusuf Budle | Cabays.com
WAXAAN HARGEYSA KU ARKAY: Muxaafid mucaarid ah iyo Mucaarid muxaafid ah – Yusuf Budle
April 16, 2019 - Written by Cabays
Xulka Rayiga – (Cabays Media ) – WAXAAN HARGEYSA KU ARKAY: Muxaafid mucaarid ah iyo Mucaarid muxaafid ah:
1- Muxaafid mucaarid ah: Mid xukuumadda ku jira oo xil iyo xoolaba loo dhiibay hadana mucaarid ah. Waa shaqsi u arka in xilka loo dhiibay uu yahay iska aamusiin reer iyo xil ku yimid saami-qaybsi laakiin aanu reerkoodu wax mudnaan ah ku lahayn xukuumadda uu u shaqeeyo. Waxa ka muuqata muxaafidnimo aan odhan karo waa heer guulwadeyn, welibana xasilooni darro badani ka muuqato. Hadana marka aad gaar u baxdaan waxa uu kuu sheegayaa in ” Madaxtooyadii ay noqotay xarun reer gaar ahi leeyahay, ciyaalka reerkuna ka taliyaan, welibana ay qarka u saaran tahay in meeshu ku dul dunto odayga, iwm.
XUSUUSIN: Anigu ma ahi mucaarid, mana ahi muxaafid, qoraalkanuna ma dhaleecaynayo mana taageerayo cid, shaqsiyaad ama kooxo gaar ah. Qoraalkanu waxa keliya oo uu ka turjumayaa wixii aan arkay mudaddii gaabnayd ee aan joogay Somaliland.